Debian 7.1, Cusboonaysiinta Debian Wheezy, Ayaa Baxday | Laga soo bilaabo Linux
Dhamaan waad salaaman tihiin. Waxaan hadda si toos ah uga helay warkan bogga rasmiga ah ee Debian in laba maalmood ka hor, markii ugu horreysay ee Debian 7 la soo baxo, oo leh magaca lambarka "Wheezy", oo ay ku jiraan bugfixes oo ku lug leh xirmooyin dhowr ah, oo ay ka mid yihiin wadayaasha NVIDIA Video ee ku jira kanaalka aan xorta ahayn ee Debian repos, the X. server sawirada org, iyo qaar ka mid ah baakadaha Libreoffice ee lahaa isku dhacyo.
Haddii aad rabto inaad cusboonaysiiso sheygaaga, kaliya ku qor boosteejadaada xidid ahaan update badnaayeen-karaa y kobcinta sicirka.
Xaaladdayda, cusbooneysiintu si dirqi ah ayey ku gaadhay 50MB aadna way u dhakhso badnayd. Waa kan shaashadda shaashadda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Debian 7.1 wuu baxay, cusbooneysiinta Debian Wheezy
Wanaagsan in la ogaado, waad ku mahadsan tahay macluumaadka!
Waad soo dhaweyneysaa saaxiib. Intaa waxaa sii dheer, way fiicantahay in la gudbiyo wararka noocan ah marka ay jiraan isticmaaleyaal aan ku dhicin xanuunka 'versionitis' laakiin runtii daneeya xasiloonida nidaamkooda.
Hagaag haa, maxaa yeelay kiiskeyga waxaan sameeyaa "cusbooneysiin | cusbooneysiin" waqti dheer, iyo markaan sameeyo sida caadiga ah waxba ama ku dhowaad waxba lama cusbooneysiiyo, sidaas darteed aniga ayaa igu fiicneyd inaan ogaado goorta aan cusbooneysiinayo.
Hagaag, marwalba waxaan ahay (ama had iyo jeer) fiiro gaar ah u leh wararka ay Debian ku daabacdo labadaba boggeeda iyo qaybteeda wararka, marka lagu daro boggeeda amniga.
Waxaan bilaabay inaan barto sida loo isticmaalo Arch, laakiin markaan arkay inay sii deynayso, ciribta Achilles waa cusbooneysiinteeda soo noqnoqota ee aan jeclayn kuwa aan ku dhicin xanuunka 'versionitis', sida kiiskeyga. Sikastaba, waan ku qanacsanahay inaan laxiriiriyo Slackware oo leh KDE, taas oo sida muuqata heysata qunsuliyada ugu saaxiibtinimada badan ee aan ilaa hada isticmaalay (waxay ku siineysaa hadalo, kaftan, kaftan, ... Maxaan ka sii weydiisan karaa qunsulkaas weyn ayaa! Slackware?!).
Laga soo guuriyay - Buugga Maamulka Debian. «Si aad ugu sheegto apt-get in aad u isticmaasho qaybinta gaarka ah marka aad raadineyso xirmooyinka si aad u cusbooneysiiso waa inaad isticmaashaa ikhtiyaarka -daaftirka-sii-deynta oo ay ku xigto magaca qeybinta la doonayo (tusaale ahaan: apt-get -t deggan ee la hagaajiyo) »
kor u qaadid -t cusbooneysiinta wheezy
Khatarta ah in qof rumeysan inuu isagu leeyahay runta buuxda uu u imaan doono inuu i khiyaaneeyo, aniga ayaa ra'yigayga dhiibanaya. Waxaan u maleynayaa in firida uu isticmaaley isticmaaleha caadiga ahi aysan sii isticmaali karin, maadaama ay aad u gabowday, iniinyaha cusubi aad ayey u dhakhso badan yihiin (bilowga, xiritaanka, isticmaalka maalinlaha ah, iwm.) Lana cusbooneysiiyey, marka lagu daro degganaansho ku filan, I ka fikir adeegsiga debian (oo leh 3.2 kernel, taxaddar) laptop-ka waa qashin wixii mashiinku bixin karo, maxaa yeelay adoo adeegsanaya barnaamijyada cusub waxaad heleysaa mashiin ka awood badan.
Waxyaabaha kale waa darawalka miiska, hagaajinta noocyadan cusubi keeneen ma aha wax ku fiicnaan lahaa in loo huro xasilloonida (kombuyuutarka dadka caadiga ah, goobta shaqada horay ayey uga duwan tahay).
waa in Debian uu diiradda saarayo xarumaha shaqada
Waxa ugu fiican ee loo adeegsado desktop-ka iyo isticmaalka warbaahinta badan waa liquorix kernel. Waxaan muddo dheer ku tijaabiyey debian wax dhibaato ahna ma qabin. Waxay kordhisaa jawaabta desktop-ka si aad loogu mahadiyo. Bakhaarka ayaa la cusbooneysiiyaa 15kii maalmoodba mar.
oo miyay taasi ku saleysan tahay kernel 3.2?
Badiyaa waa firirkii ugu dambeeyay ee xasiloon. Waxay sidoo kale leedahay taxane hore oo kernel ah oo ku saleysan taxanaha 3.4. Hadda waa 3.9.6 Faahfaahin dheeraad ah: http://liquorix.net/
Kudar kanaalka aan xorta ahayn kaydinta rasmiga ah iyo waraaqaha rasmiga ah ee debian, waxaadna rakibaysaa darawallada iyo koodhadhka lahaanshaha ee aad u baahan tahay. Wixii kale, waxaad ka heleysaa furaha, inkasta oo aad u taxaddar badan.
Eeg, uma arko tixraacaagii hore mid ansax ah .. Maskaxda ku hay in Debian ay u cusbooneysiiso xirmooyinkeeda qaab la mid ah sida RHEL u sameyso .. Si aad ii fahanto aniga oo la xiriira Linux tusaale ahaan RHEL waxay ilaalinaysaa nooc kernel ah oo ay iyagu ku dar hagaajinta noocyada dambe laakiin haynta nooc isku mid ah kernel ka. Debian si isku mid ah ayey u shaqeysaa laakiin isbeddelada waxaa loogu wareejinayaa oo keliya noocyada 'LTS' ee nuxurka Linux. Ilaa hadda nooca ugu dambeeya ee Lern ​​kernel waa taxanaha 3.4.x, macno malahan in loo guuro kernel buuxa oo kaliya kan cusub ayaa loo isticmaalaa in lagu daro taageerada qalabka cusub. Caddaynta tan waxaa laga heli karaa qoraalka sii deynta ee Debian 7.1 kaas oo lagu soo dejiyay astaamo ka socda 3.4 kernel.
laakiin xitaa sidaas darteed kernel (3.4) weli waa mid aad u da 'weyn, tusaale ahaan, isbeddelka waxqabadka (ee ka soo horjeedka ubuntu ee aan isticmaalay) inta u dhaxaysa kernel 3.5 iyo kernel 3.8 aad ayuu u badnaa.
Waxaan u arkaa mid xiiso leh waxa debian sameeyo, ku darista astaamo cusub xasiloonida, aad uga fiican sidii aan u maleynayay, in kastoo aniga ahaan aniga igu filneyn, laakiin waa xarun shaqo
Maaha wax aad u badan ..., inta badan waqtiga sidoo kale waxaa jira dib u celin aad u ballaaran.
Haa, laakiin badanaa way kooban yihiin. Amniga Debian marar dhif ah ayaa sameeya noocyada hoos u dhaca ah mooyee haddii isku-duwaha jahannamada uu sameeyo isku-dubbarid xun oo ku filan inuu sameeyo ficilkan oo kale.
kooban? Waxaan la dhibtooday dhibaatada ka jirta maqalkeyga 'intel hda audio' oo ah 3 kernel ..., 3.3, 3.4 iyo 3.5 ..., haddii taasi ay tahay mid kooban oo XD ah ....
Wax fikrad ah malahan, maxaa yeelay ma haysto kumbuyuutarka kumbuyuutarka ugu dambeeya. Sidoo kale, waxaan hayaa goobta shaqada ee loo yaqaan 'HP dc770' oo runti aniga ila shaqeeya yaabab.
Waxaan haystaa HP pavilion dv6 2120es, dhibaatada ugu weyni waxay tahay waxaan ahaa 3 kernel anigoon awoodin inaan aamusiyo kuwa hadla .., sidaa darteed maqalka wuxuu ka soo baxay labada sameecado iyo samaacadaha.
Hadda kombiyuutarka cusub ee aan soo iibsaday, maadaama kernel 3.8 kuma bilaabi karo intel hd4000.
Shalay kumbuyuutarkayga ayaa lagu aamusiyay isticmaalka Ardor. Waad ku mahadsantahay wanaag in "alsa unload" iyo "alsa reload" oo ku jira qunsulka qaabka xididka iyo dib u bilaabid, dhibaatadii waa la xaliyay.
@ pandev92 Taasi waxay umuuqataa mid ka dhib badan alsa iyo pulseaudio marka loo eego Kernel, waxaan u idhi maxaa yeelay markaan rakibay debian isla waxbaa igu dhacay, kumbuyuutarka kumbuyuutarka kumuu soo bixin codku, isagoo ku ciyaaraya goobaha alsa dhamaadka shaqeeyey, iyo laptop-ka waxaan ku qabey dhibaatada maqalka ee ku hadla afhayeenka iyo samaacadaha isla waqtigaas, rakibida pulseaudio iyo maamulahaaga maqalka ayaa kala saari kara.
Xaaladdayda, waxaan ku qoray "alsa unload" iyo "alsa-reload" terminal-ka, dib-u-bilaabid iyo dhawaqii ayaa soo noqday (oo waxaan hayaa isla Intel chipset-ka uu leeyahay @ pandev92 uu leeyahay).
Taas waan kugu raacsanahay, petercheco. Intaa waxaa sii dheer, sanadkii la soo dhaafay Debian wuxuu mar kale noqday midka loogu adeegsiga badan yahay ee server-yada iyo nidaamka ugu isticmaalka badan ee mashiinada nuucaani ah.
Isticmaalaha guud midka ugu fiican ayaa ah Debian Testing, 3.9 kernel ayaa qarka u saaran inuu soo galo
Ku jawaab Tuxxx
Haa, waa hagaag. Sidoo kale, kama cabanaysid inaad haysato ku tiirsanaantaada "waqtigeedii ka dib".
Waxaan haystaa kombuyuutar loo yaqaan 'HP PC' oo loo sameeyay gaar ahaan xafiisyada (si kale haddii loo dhigo, goob shaqo) oo xoogaa duug ah, laakiin lafteedu waxay leedahay xawaare farsamo lagu ixtiraamo (sida iska cad Intel chipset-ka ay haysato darteed). Intaa waxaa dheer, waxaan ku kordhiyay keydka rasmiga ah iyo kan amniga ee Debian leeyahay, sidaa darteed xoogaa yar oo aan isku halleeyo waxaan ka dhigi lahaa diyaar u ah inay rakibto oo ay la ciyaarto Steam.
Hagaag, wax fudud samee, u beddel imtixaan ama SID waana intaas: 3
Si fiican ayaa loo yidhi.
Si hufan waxqabadka kernelku waa ka soo horjeedka waxa aad sheegto. Maaddaama noocyadu isbeddelaan, waxay noqoneysaa mid caajis ah, (tanna waxaa aqbalay Linus laftiisa). Beddelaadda noocyada had iyo jeer macnaheedu maahan waxqabad wanaagsan (in isticmaalaha ugu dambeeya uu ogaan doono sida loo xusho, loo hagaajiyo loona ururiyo), laakiin xoogga ayaa la saarayaa taageerada qalabka cusub, xulashooyinka cusub iyo amniga, iyada oo aan la iloobin in la sii wado xoqitaanka noocyo aad u da 'weyn (longterm) ), wax badan oo ka badan 3.2 ay debian adeegsato.
Sababtoo ah inay ka culus tahay macnaheedu maahan inaysan hagaajin doonin waxqabadka.
isticmaale edo wuxuu ka hadlay xawaaraha waxaana ku khalday waxqabad, waxay ahayd inaan isticmaalo eraygaas, raali ahaw: P. Waxqabadka (waxa ay soo saarto ama waxtar u leh) ayaa soo hagaagay, laakiin hoos u dhaca ayaa ah in xawaaraha uu hoos u dhacay 12% tan iyo markii la abuuray. Taasi waa shaxanka ay ahayd inaan horay u qeexo, ee uu Linus Torvalds qudhiisu aqbalay, salaan!
Ku saabsan kernel 3.2 waad saxantahay. Badanaa waxaan isticmaalaa xasillooni laakiin tan iyo markii aan isticmaalo daawada loo yaqaan 'aptosid' (debian sid with brake and stabilizer!) Waxaan ogaaday in xuubka 3.9 uu yahay mid layaab leh waxayna qaadataa seddex meelood meel waqtiga kabanka mana garanayo inta kabadan ee xiritaankiisa (off) ) ilaa amd gaboobay 2.4 sempron iyo 400Mhz wan. LAAKIIN !!!
... haddii aad dhigatid dib-u-dhigashada debian-backports, waxaad ku cusbooneysiin kartaa kernel-ka nooca uu sida muuqata halkaas ka jiro; sidoo kale wadayaasha fiidiyowga -WATCH OUT! -
PS: kuwa cabsida leh ama aan dhibaatooyinka rabin (waxaan u maleynayaa inaan ka mid ahay) waxaan kugula talinayaa http://www.aptosid.org (Weli waxaan haystaa debian xasilloon qaybta kale)
Shaashad wanaagsan soo qaad midka u muuqda sida terminalka shirkaddaada Debian Wheezy. Sidee u rakibtay? Waxaa laga yaabaa in repo gaar ah? Waxaan u isticmaalaa Debian Wheezy, xasilloon, in kasta oo la sheego inay u shaqayso si la mid ah tijaabooyinka oo aan ku rakibo cusbooneysiinta aad shalay sheegaysay. My kernel waa 3.2.0-4-amd64, cusbooneysiintan ka dib. Salaan.
$ sudo dpkg -i shaashadda-2.5.0.deb
Ku jawaab tmo
Ma aanan ogeyn habkaas. Waad ku mahadsantahay soo galinta.
Waad ku mahadsan tahay tabarucaadda tmo, aad u naxariis badan. Si kastaba ha noqotee waxaan weydiinayaa: Ma jiraa amar kale oo markaa "shaashadda" lagu hagaajiyo barta iyada oo aan loo baahnayn in wax laga beddelo "shaashadda" mar kasta si ay xogtu u muuqato? Mahadsanid iyo salaan wacan.
Kuu sheegi kari maayo. Kaliya waan u yeerayaa waxayna si macquul ah ii tusaysaa macluumaadka cusboonaysiinta ee nidaamkayga. Xaqiiqdii waa inay noqotaa sababtoo ah waxaan isticmaalaa nooca ugu dambeeya ee shaashadda.
Waxaan ku rakibay shaashadda gacanta iyo iyada oo loo marayo casharradan gaaban >> https://blog.desdelinux.net/instalar-screenfetch/
Taasi waa igu filneyd, marka lagu daro u-habeynta astaanta gnome-terminal si aan uga dhigo mid la akhriyi karo oo aan ka fogaado dhibaatooyinka marka aan qorayo amarrada qaarkood.
Cusboonaysiintaani waxay keentay isbeddelo aad muhiim u ah.
Asal ahaan waxaad dhihi kartaa hadda waa markii Debian Wheezy uu runtii soo baxay tan iyo markii nooca 7.0.0 uu soo baxay xoogaa dhicis ah sababo la xiriira cadaadiska isticmaalayaasha tan iyo markii Wheezy uu u keenayo Debian adduun cusub oo ka wanaagsan tan iyo markii Debian Squeeze ay si dhakhso leh u gabowday wareeg dheer oo qabow iyo cilad hagaajin: D. Caddaynta tani waa xaqiiqda ah in Debian uusan la imaan cusbooneysiintan 7.0.1 laakiin 7.1.0 ..
Liiska isbedelada waa kan:
Isla sababtaas awgeed ayaan u daabacay warkan, marka lagu daro xallinta dhibaatada jeegagga aan shaqaynin qaybta ugu horreysa ee ilaha software-ka.
Qof kasta oo raba kernel hadda iyo Zen, waxaan aad ugu talinayaa:
Aniga ahaan, waa ku habboon tahay haddii mashiinku uusan ahayn server.
Tilmaamaha rakibida ayaa la mid ah had iyo jeer, iyo bogga si fiican ayaa loogu sharaxay. Horaba waad iisheegtay sidee tahay 😉
Ku jawaab kannabix
Unugyada liquorix-ka ma aha wax guriga lagu qoro, waan arkay iyaga mana hagaajinayaan intaas in le'eg, walxaha aan caadiga ahayn waligood si buuxda looma hagaajin doono, waa inaad ku ciyaarto lspci oo aad ka saarto hababka aan loo baahnayn.
Wixii talo ah ee loogu talagalay qof leh laptop hore (intel centrino oo leh chipset in ka badan 7 sano ka hor, 1GB wan ram)? Waxaan ula jeedaa, miyuu liquorix run ahaantii igu habboonaan lahaa? mise waa halista ugu fiican ee laga fogaado?
Feejignaan wax kasta oo aad awoodid ... Xitaa waxaan heli lahaa baraf.
Waad u qori kartaa LXDE sidii GUI, intaas waxaa sii dheer inaad mudnaanta siineyso xirmooyinka darawalka qaarkood oo aan run ahaantii la isticmaalin sidaasna aad nidaamkaaga ugu dhaqso badnaan karto. Waxaan isticmaalay PC-ga kumbuyuutarka PCP-ga ee fasalka 1aad. jiil wata Debian Squeeze, xawaaraha ay ku socon jirtay wuu ka sarreeyay kii Windows.
Sikastaba, waad rakibi kartaa Debian 7 laakiin waxaad uga tagaysaa qalabka korontada sida mudnaanta, GUI (doorbidayo XFCE ama LXDE) iyo codka kadib markaad si sax ah u qaabeysay feylka "/etc/apt/sources.list".
Waxaan u maleynayaa waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid si aad u hagaajiso nidaamkaaga waa inaad soo uruuriso kernel-kaaga haddii aad rabto inaad ugu fiicnaato ugu badnaan. Waxaan kuu daynayaa hage:
Wanaagsan had iyo jeer dadka Debian, iyaga oo saxaaya dhibaatooyinka iyaga la jira si ay u siiyaan wax walba sida ugu macquulsan: D!
Soo dejinaya ..
Sida iska cad, maadaama Debian uu ka mid yahay saddexda degel ee degen halkaas (Slackware, Debian, RHEL / CentOS).
Haa, miisaankeedu waa sida 140mb. Kadib Grub Debian 7.1 ayaa soo baxa
Xaaladdayda, waxaan ku beddelay libreoffice-ka oo si ku-meel-gaadh ah ugu yimid libreoffice-kii ugu dambeeyay ee ka muuqda bogga rasmiga ah. Lafteeda lafteeda, libreoffice-ku waa waxa ugu miisaanka cusboonaysiinta.
Waxaanan u maleynayaa in 140 MB aysan waxba ka jirin 560 ama 620 MB oo cusbooneysiintu culeyskeedu yahay Windows 7 Service Pack.
Waxba ma ahan. Kaaga darani waa marka kde, libreoffice, netbeans iyo eclipse cusbooneysiin la isugu geeyo archlinux sida 1gb oo cusbooneysiin ah, in kastoo aan soo degsaday 30gb ciyaarood 😛 marka riwaayad ma jirto
Oh, hubaal Taasi waa cusbooneysiin dhab ah. Laakiin kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Debian wheezy PC', ma arag dhibaatadaas oo kale maxaa yeelay had iyo jeer waxay cusbooneysiiyaan kernel iyo qaybaha kale ee xasaasiga ah marka hore. Inta hartay dib ayaa laga cusbooneysiin doonaa iyadoo horumarro kala geddisan leh oo dulqaad badan leh. Codsiyada horumarinta ee Debian sida Eclipse had iyo jeer waa la dhajiyaa kadib cusbooneysiin dhab ah oo dhab ah.
dabcan kaliya waa cusbooneysiinta amniga. Tilmaamaha rakibidda petercheco ma garanayo haddii qalad jiro ama maxaa jira, laakiin markaad ku darto lacag-la'aanta bilaashka ah waxay sidoo kale ku dareysaa khadadka deb-src, sida la sheegayo ma jiro ilo laga helo barnaamijyo aan lacag la'aan ahayn iyo in xariiqda ayaa ah isha: p Waxaa laga yaabaa inay sidaas tahay?
Haa, waxay noqon kartaa inaad taxaddar ahaan uga saarto deb-src si aad uga fogaato dhibaatooyinka xagga bannaan. Had iyo jeer waan joojiyaa deb-src si aan uga fogaado dhibaatooyinka noocaas ah.
Marka laga hadlayo keydka lacag la'aanta ah ee loo yaqaan 'Debian repos' oo lagu soo daray hagegeyga, dabcan waxaa jira xirmooyin src oo ku jira keydka sidaas darteedna waa sax
Waxaan kuu daynayaa muunad:
Si la mid ah ayaa ku jirta bakhaarka http://security.debian.org/ haddii kale qalad ayaa dhici doona marka la fulinayo apt-get cusboonaysiinta digniinta ee qaladkaas 😀
Dhibaatada meesha banaan ee abuuri karta markay shaqeysay src eliotime3000, ma jiraan wax aan lagu hagaajinin apt-get autoremove iyo apt-get autoclean: D. Weli qumman ayaa ka taxaddaraya nadiifinta faylasha ka dib rakibidda xirmo :).
Waad ku mahadsan tahay Peter sharaxaadda.
Waxaan horeyba u isticmaalay apt-get autoclean iyo apt-get autoremove runtiina runtii wax badan ayey i caawiyeen, marka laga reebo badbaadinta maqaarkayga markaan doonayo inaan ka takhaluso ku tiirsanaanta da'daas oo kale.
Xilligan la joogo waxaan doonayaa inaan cusbooneysiiyo nidaamkeyga.
xiisaha leh xaqiiqda ah inaysan ahayn debian 7.0.1 laakiin debian 7.1.
Sida @petercheco uu sheegay, sababta 7.1 loogu magac daray halkii 7.0.1 ay ahayd sababta oo ah nooca 7.0 (aniga ahaan RTM ah) ayaa goor hore soo baxay iyo sababta oo ah waxay ubaahantahay in laxakumo dhowr cayayaano oo muhiim ah (oo lagu doodi karo sii deynta 5 May waxay ahayd buunbuunin saafi ah) .
Moka: xirmo qurux badan oo GNOME ah
Ubuntu Touch codsiyada waxaa laga heli karaa Ubuntu 13.10